တစ် ဦး LEGO နိုင်ဘူး Marvel မျှော်လင့်ထားတာထက် minifigure ပွဲ ဦး ထွက်လား။
Kevin Feige ကမကြာခင်လာတော့မယ့်အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Marvel စူပါဟီးရိုးသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်စောစွာပွဲ ဦး ထွက်မည်ဖြစ်ပြီး minifigure တစ်ခုသည်လည်းမကြာမီစောလာလိမ့်မည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် Comicbook.com၏သမ္မတ Marvel စတူဒီယိုကီဗင် Feige က Riri Williams သည်သူမအတွက်ပထမဆုံးမျှော်မှန်းထားသည်ထက်စောစွာပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည် သံမဏိart streaming ပြသ.
သံမဏိart တစျဦးဖွစျသညျ စီမံကိန်းများစွာ p အဖြစ်ထုတ်ဝေရန်စီစဉ်ထားသည်art MCU ရှိနောက်တစ်ဆင့်၏စီးရီးများကိုသီးသန့်ထုတ်လွှင့်သည် Disney+။ ယခုအချိန်တွင်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်မပြုသော်လည်း Riri သည် ၂၀၂၂ တွင်ဖြန့်ချိမည့် Black Panther Sequel တွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်ကိုထင်ရှားသည်။ ရုပ်ပြများတွင်ဆယ်ကျော်သက်တီထွင်သူသည် Tony Stark ၏ခြေရာကိုလိုက်ရန်နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စုံကိုတီထွင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အဆင့်မြင့်လက်နက်
“ ငါတို့က Black Panther: Wakanda Forever နဲ့ Riri Williams ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုအခုတွေ့လိမ့်မယ်။ Black က Panther2ပထမ၊ ” Kevin Feige က“ သူမက startသူမ Ironhe မတိုင်ခင်ဒီအပတ်မှာ ed ရိုက်ကူးမယ်ထင်တယ်art စီးရီး။"
သမ္မတနှင့်အတူ Marvel စတူဒီယိုများသည်မှားသည်ဟုမယူဆနိုင်ပါက Ironhe ဟုဆိုလိုနိုင်သည်artBlack Panther: Wakanda Forever အတွက် Monica Rambeau ပေါ်လာပုံနှင့်ဆင်တူသည့်အလားအလာရှိသော minifigure ကိုပထမဆုံးပြသလိမ့်မည်။ 71031 Marvel စတူဒီယို လာမည့် The မတိုင်မီ WandaVision ကိုကိုယ်စားပြုရန် Marvelရုပ်ရှင်။
Black Panther သို့မဟုတ် Captain အတွက်အနာဂတ်ပုံစံများကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ Marvel နောက်ဆက်တွဲများရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောဆင်ခြေကိုပေးနိုင်သည် Lego Ironhe အတွက်မည်သည့်မဆိုအစုံမပါမီ Riri Williams minifigure တစ်ခုနှင့်စမ်းသပ်ရန်အုပ်စုဖွဲ့ပါart လွှတ်ပေး။
← LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယို 'Monica Rambeau?
LEGO Seasonal Santa polybag ၏ပထမဆုံးပုံပေါ်လာသည် →